SAAMEYNTA UU COVID19 KU YEESHAY HAY’ADAHA WAXBARASHO EE DALKA GAAR AHAAN ISKUULLADA IYO JAAMACADAHA. – Hawraar Institute of Research, Security and Policy Studies
SAAMEYNTA UU COVID19 KU YEESHAY HAY’ADAHA WAXBARASHO EE DALKA GAAR AHAAN ISKUULLADA IYO JAAMACADAHA.
Home >> Publications >>
Ka dib markii uu ka dilaacay dunida Caabuqa COVID19 bilawgii sannadka 2020, waxay guud ahaan waddamada dunida wajaheen dhibaato dhinac walba ah, waxaana inta badan dunida lagu soo rogay bandoow (Lockdown), waxaa la joojiyey isu-socodka gaadiidka, dadka iyo waxbarashada. Arrintani ayaa horseeday masiibooyin badan oo ay ka mid tahay in dhaqaalaha waddamo badan ay dhulka galaan, Waxbarashada oo istaagtay. Dalal badan ayaa isla markiiba ka falceliyey kana hortagay caabuqa Koronavirus taas oo u suurtogelisay awooddooda dhaqaale, tayada nidaamka caafimaad iyo hoggaanka dalkaasi.
Soomaaliya oo ka mid ah waddamada ku yaalla barriga Afrika lana daalla dhacayey dagaalo sokeeye muddo 30 sanno ah sidoo kalena uu burbur xooggan soo gaaray inta badan kaabayaasha dhaqaale oo ay ugu horeyso Nidaamka Caafimaad ayaa Kiiskii ugu horeeyey ee COVID-19 laga helay 16-kii Maarso, 2020. Hay’adaha caafimaad oo aan u diyaarsaneyn ka falcelinta Caabuqa iyo ka wacyigelinta shacabka ayaa isku dayey tallaabo kasta oo ay ugu hortagi karaan Koronavirus. Dowladda ayaa xilligaas amar ku bixisay in la xiro dhammaan Xarrumaha Waxbarasho ayna dadka raacaan tallaabooyinka caafimaad si looga hortago caabuqa Koronavirus. Ka dib Xeritaanka Goobaha waxbarasho waxay bahda waxbarashada isku dayeen inay qaadaan tallaabo aan loo diyaargaroobin oo aheyd ka faa’ideysiga Aalladda Fogaan Aragga si loo sii joogteeyo casharada.
NIDAAMKA WAXBARASHO EE FOGAAN ARAGGA
Inta badan xarrumaha waxbarasho ee dalka ayaa ah kuwo gaar loo leeyahay, waxayna go’aansadeen inay sii joogteeyaan bixinta aqoonta ay u gudbinayaan ardayda dalka iyagoo adeegsanaya Nidaamka Foggaan Aragga ee Waxbarasho (Online Education Platforms). Caqabadihii ugu adkaa ee lala kulmay ka dib xeritaanka xarrumaha waxbarasho waxaa ka mid ahaa in ardayda aysan u diyaarsaneyn isticmaalka aalladda Kombuyuutarka iyo nidaamka fogaan aragga taas oo arday farabadan ka hor istaagtay inay la socdaan ardayda kale ee dhigooda ah.
Sidoo kale macallimiinta ayaa ka mid ahaa dadka saameynta xooggan ka soo gaartay xeritaanka iskuullada iyagoo lagu qasbay inay isticmaallaan aalad aysan aqoon u laheyn si ay casharo u siiyaan ardayda. Macallimiin badan oo aan weydiinay dhibaatooyinka ay la kulmeen ayaa sheegay:
– In ay ku adkeyd isticmaalka nidaamka waxbarasho ee fogaan aragga, mana loo tababarin sida loo isticmaalo barnaamijyada (features) ay aalladu ka sameysan tahay.
– Xiriirka ardayda iyo macallinka oo aad u liitay, maadaama macallinku uusan haysanin awood uu ku xakameeyo fahanka iyo dhageysiga ardayda ee casharada la bixinayo.
– Macallimiinta qaar ayaa sheegay in mushaarkooda la dhimay, halkaasna ay kala kulmeen dhibaato dhaqaale oo aad u baaxad weyn.
Wasaaradda waxbarashada ma laheyn qorsho ay ku hagto nidaamka waxbarasho ee fogaan aragga ah, ma jirin garab dhaqaale, tababar ama talo ay la wadaagtay xarrumaha waxbarashada.
In kastoo ay dowladda dalka ka jirta ay sameysay Xarun Wicitaan ay la soo xiriiraan shacabka si wacyigelin loo siiyo haddana waxaa aad u liitay iskaashiga wadashaqeyn ee kala dhaxeeyey bahda waxbarashada.
SAAMEYNTA WAXBARASHO UU KEENAY COVID19
Inta lagu jiray sanadkii lasoo dhaafay ee 2020 ayaa aad looga dareemay dalka saameynta xun uu COVID19 u keenay ardayda ka dib markii 8,550 arday oo ka dhigan 25.35% ardayda imtixaanka gashay oo aheyd 33,727 ay ku dhaceen Imtixaanka Dhammaadka Sanad-dugsiyeedka fasallada 12-aad. Ardayda ugu badan ee ku dhacay imtixaanka ayaa deegaan ahaan ku sugnaa Gobolka Banaadir oo ah halka uu ka dillaacay Caabuqa Coronavirus.
Warbixintani ayaa si kooban uga hadleysa sida Caabuqa Coronavirus u saameeyey Bahda Waxbarashada Dalka. Warbixinta ayaa si gaar ah diiradda u saareysa Dugsiyada sare iyo Jaamacadaha oo u tallaabay Nidaamka Waxbarasho ee Fogaan Aragga (Online Education Platform) si ay u joogteeyaan casharada ay bixinayaan. Waxaa isbedel ku yimaaday nidaamka iyo qaabka cashar bixinta, xiriirka macallinka iyo ardayda, anshaxa iyo dhaqanka ardayda iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay habka lacag bixinta.
Warbixintaan oo ka kooban 18 bog oo luuqadda English-ka ah ayaa lagu falanqeeyey Xaallada Coronavirus ee dalka, saameynta waxbarasho iyo dhaqaale iyo isbedelka nidaamka waxbarasho ee dalka. Warbixintani ayaa soo jeedinaysa tallooyin wax ku ool ah ee la xiriira Nidaamka Waxbarasho ee dalku wajahay iyo waxa la gudboon bahda waxbarashada.
Sidoo kale muhiimadda ay leedahay in maalgeshi ballaaran lagu sameeyo Nidaamka Waxbarasho ee Fogaan Aragga ah (Online Education Platforms).
Ka degso halkaan warbixinta oo dhameystiran – DOWNLOAD HERE
Abdikarim M. Hussein
Agaasimaha Machadka Cilmi-baarista iyo Daraasaadka Siyaasadda iyo Amniga;
Hawraar Institute for Research & Security Studies
Mr. Abdikarim M. Hussein